I-Novena yamabhonasi kaKhisimusi, inyunyana yomndeni | Ukuhamba kwe-Absolut
Daniel | 29/06/2021 11:20 | Kubuyekezwe ku- 29/06/2021 12:22 | Colombia
La UStrenna Novena Ingenye ye Amasiko kaKhisimusi okubaluleke kakhulu futhi kugxilile Colombia. Kuyaziwa kakhulu nakwamanye amazwe aseNingizimu Melika, njengeVenezuela noma i-Ecuador. Ukubaluleka kwawo kweqa into yenkolo nje, kube isenzo senhlalo kanye nesiko elenzelwe ubumbano lwemindeni.
Ngesikhathi se-Advent, izinsuku eziyisishiyagalolunye (kusuka ngoDisemba 16 kuya ku-24, kubandakanywa), imindeni evela ezweni lonke iyahlangana ukuze khulekani ndawonye nihlabelele izingoma zikaKhisimusi. Iphoyinti lomhlangano ngaso sonke isikhathi yiNkundla Yokuzalwa KukaJesu noma Isimo Sokuzalwa KukaJesu, esisendaweni ephakathi endlini. Igama "lesishiyagalolunye" lisuselwa ngqo kulezi zinsuku eziyisishiyagalolunye. Isandulela somoya ngoKhisimusi.
1 Umsuka we-Aguinaldos novena
2 Ukuthandaza kuNovena
Umsuka we-Aguinaldos novena
Leli siko elihle lamaKhatholika lazalelwa emazweni aseMelika, ngezikhathi zamakoloni. Kwakunjalo empeleni UFray Fernando de Jesús Larrea, inkolo yaseFranciscan eyazalelwa eQuito, owayezoqala lo mkhuba. Konke kwaqala ngo-1725, ngemuva kokugcotshwa kwakhe njengompristi. Umqondo wokuthandaza eduze kukaKuzalwa KukaJesu Ongumntwana phakathi nezinsuku eziyisishiyagalolunye ngaphambi kukaKhisimusi wamukelwa kahle phakathi kwabazinikele.
Kodwa-ke, indlela imindeni namuhla egubha ngayo i-Aguinaldos Novena eColombia kungenxa yokuguqulwa okwenziwe yi umama uMaria Ignacia, ekupheleni kwekhulu le-XIX. Nguyena owanikela ngalemikhuleko ngendlela yohlu lwezincwadi zeBhayibheli, wengeza nezinjabulo, okuyizona izingoma ezifakwe phakathi komkhuleko nomthandazo ezibizwa kanjalo.
Futhi nokho, akukho neyodwa inguqulo yeNovena de Aguinaldos esindile kuze kube yilolu suku, kodwa eziningana. Eminye ifundwa ngeSpanishi sakudala, esidala ngandlela-thile futhi ekude nokuzwela kwamanje, kusetshenziswa isibonelo uhlobo lwe- "vos" enenhlonipho. Abanye, noma kunjalo, bashintshiwe ukuze bavuselele umusho ube olimini lwanamuhla.
Lokhu kuhle ividiyo okushiwo ngumkhuleko weNovena de Aguinaldos emphakathini waseColombia kufingqiwe kahle:
Njengoba ukwazi ukubona, kwabaseColombia iNovena de Aguinaldos akuyona inkolelo yenkolo kuphela, kodwa futhi iyisizathu sokuqinisa izibopho phakathi kwabangane nomndeni. I- Christmas gastronomy futhi i umculo nabo abaphuthelwa yilokhu kuqokwa.
Ngaphandle kwethoni yayo engenankinga nohlamvu olujwayelekile, iNovena de Aguinaldos Kungumkhosi olandela imihlahlandlela nemithetho echazwe kahle. Iqala njalo ngoDisemba 16 iphele ngoKhisimusi. Kwamanye amakhaya umthandazo wenziwa ngaphambi kwesidlo sakusihlwa, kanti kweminye ushiyelwa kamuva.
INovena yaseStrenna igujwa njengomndeni
Umqondo walesi siko ukukhumbula izinyanga ezandulela ukuzalwa kukaJesu, isikhathi esiphelela ekuzalweni kwakhe eBetlehema. Umama María Ignacia, owabeka indinganiso yendlela yokuthandaza kuma-novenas, wasungula i- ukuhleleka kwemisho Ngokulandelayo:
Okokuqala Umthandazo nsuku zonke, ngokulandela ngokwethembeka umbhalo wokuqala kaFray Fernando de Jesús Larrea. Ngemuva kwalokhu kufundwa, i "Udumo kuBaba".
Kulandelwa kamuva ne- ukucatshangelwa kosuku. Kukhona eyodwa yezinsuku eziyisishiyagalolunye.
La umkhuleko eNcasakazini Ebusisiwe iza ngokulandelayo, ilandelwe ngumkhuleko ka ayisishiyagalolunye Dumisa uMariya (eyodwa ngayinye yama-novenas).
Ngemuva kwalokho kuba ithuba le- umkhuleko kuSanta Joseph, ebuye ifundwe nsuku zonke. Ukufundwa kugcina ngemikhuleko emithathu: "uBaba Wethu", "Dumisani uMariya" kanye "Nenkazimulo kuBaba."
I-Los Injabulo noma ama-Aspirations ngokuza kweNgane uJesu yakha ingxenye yomculo ephila kakhulu ye-novena. Izwi lisho izingoma, ezivame ukuphendulwa yikhwaya.
Ngemuva kwalokhu kuza ifayili le- umkhuleko kuMntwana uJesu, okuyinto ngandlela thile eyingxenye esemqoka yesishiyagalolunye. Ngemuva kwakhe, ababambiqhaza bathatha ithuba lokwenza izicelo zabo kusana olunguJesu, imvamisa ifisela impilo nempumelelo yekhaya nomndeni.
Owesishiyagalolunye uphetha nge- imisho yokugcina, okuyinto evame ukuba nguBaba Wethu neNkazimulo kuBaba.
Le mikhuleko nezingoma kufanele zenziwe njalo kulezi zinsuku eziyisishiyagalolunye. Njengesibonelo salokhu okuchazwe ngenhla, lona ngumbhalo wokuqala kaFray Fernando de Jesús Larrea lapho kuqala khona isikhathi ngasinye seNovena de Aguinaldos:
«UNkulunkulu olunge kakhulu onothando olungapheli, obathanda kangaka abantu, waze wabanika indodana yakho isibambiso esihle sothando lwakho ukuze, enze umuntu esiswini seNtombi, azalwe emkhombeni wezempilo nempilo yethu . Mina, egameni labo bonke abantu abafayo, ngikubonga ngokungapheli ngenzuzo enjalo yobukhosi; futhi ekubuyiseleni kuye ngikunikeza ubumpofu, ukuthobeka nokunye okuhle kwendodana yakho enabantu, ngikunxusa ngokufaneleka kwakhe kobunkulunkulu, ngokungaphatheki kahle azalwa ngakho, nangezinyembezi zesisa azichithile emkhombeni, ukuthi wena lahla izinhliziyo zethu ngokuthobeka okujulile, ngothando oluvuthayo, ngokwedelela okuphelele kwazo zonke izinto zasemhlabeni, ukuze uJesu osanda kuzalwa athole imbeleko yakhe kuzo, futhi aphile phakade. Amen ".
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ibhonasi kaKhisimusi novena, inyunyana yomndeni
UMedusa, lowo ophethe izinyoka ekhanda